RAMP: Bixinta Waxyaabaha Fudud ee Udhaxeeya Goobaha WordPress | Martech Zone
Waxaan badanaa u diyaarinaa goob lagu diyaariyo macmiilka ka dibna waxaan u wareejinaa goobta wax lagu soo saaro wax soo saar. Iyadoo la adeegsanayo WordPress, waxyaabaha ku jira labadaba waxay ku saleysan yihiin feyl waxaana laga helaa keydka macluumaadka. Iswaafajinta feylasha waa wax iska fudud, laakiin iswaafajinta keydka macluumaadka ma fududa. RAMP waa aalad loo sameeyay inay ka caawiso shirkadaha inay u haajiraan waxyaabaha ay ka kooban yihiin WordPress ee u dhexeeya boggaga.
RAMP wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isbedel ku sameyso deegaankaaga diyaarinta, ka dibna si xushmad leh ugu riix isbedeladan goobtaada wax soo saarka. Marka waxyaabaha dib loo eego lana ansixiyo, waxaad aadi kartaa boggaaga RAMP, dooro isbeddelada ku jira, oo ku riix goobtaada wax soo saarka.
RAMP wuxuu socon doonaa jeeg ka hor-duulimaad gaar ah oo hubin doona in wax waliba si hagaagsan u socdaan oo kuu oggolaanaya inaad laba-hubiso waxa aad qorsheyneyso inaad riixdo - oo ay ku jiraan:
Qaybaha, astaamaha iyo isticmaaleyaasha ay tixraacayaan qoraallada kale, bogagga, iwm ayaa si toos ah loogu abuuri doonaa wax soo saarka.
Marka bogga cunugga lagu daro qeyb ka mid ah bogga waalidka la'aantiis, isla markaana bogga waalidku uusan ka jirin wax soo saar.
Qeyb cunug oo la xushay halka qaybta waalidku aysan wax soo saar ku jirin kana mid ahayn dufcadda.
Haddii sawir loo xushay in lagu daro dufcad, laakiin sawirka ayaa laga tirtiray nidaamka faylka (ka baxsan WordPress).
Haddii bog, qayb ama summad lagu daro menu la soo xulay, laakiin uusan ka jirin wax soo saar oo uusan ka mid ahayn dufcaddii.
Mawduucyada ku beddelay wax soo saarka oo ka cusub isbeddelada ku yimaadda dajinta.
RAMP sidoo kale waxaa ku jira badhanka gadaal duub ee dufcaddii ugu dambeysay. Waad ku mahadsantahay macaamiisheenna HCCMIS, an caymiska safarka, yaa noo soo sheegay inay tijaabinayaan nidaamka.
Tags: geynta waxyaabahadadku jecel yihiinRAMPgeynta wordpresswax soo saarka wordpresswordpress daadin
Reachli: Shabakada Xayeysiinta Muuqaalka